WARBIXIN: Aubameyang to Arsenal, Mahrez to Man City & Shan Saxiix Oo Waaweyn Oo Dhici Kara Maanta – Kooxda.com
Home 2018 January France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Aubameyang to Arsenal, Mahrez to Man City & Shan Saxiix Oo Waaweyn Oo Dhici Kara Maanta
Tan ilaa sanadkii 2011 wakhtigaas oo uu Fernanado Torres ka tagay Liverpool kuna biiray kooxda chelsea, Suuqa January ayaan magacyo waaweyn lala kala wareegin.
Laakiin waxa ay durba kooxuhu suuqan sameeyeen saxiixyo waaweyn bishan iyada oo ay Liverpool 75 milyan ka bixisay Virgil Van Dijk ka hor inta ayna Philippe Coutinho u waayin Barcelona.
Alexis Sanchez ayaa sidoo kale helay rabitaankiisii isaga oo ka tagay Arsenal kuna biiray kooxda Man United kuwaas oo tartanka galay wakhti dambe.
Arsenal ayaa dhankeeda luminta Sanchez ku heshay xiddiga Henrikh Mkhitaryan kaas oo ka qayb noqday heshiiska Alexis Sanchez ugu biiray United.
Hadaba iyada oo haatan suuqa xiritaankiisa ka dhimantahay wax ka yar 24 saacdood waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa saxiixyada ay u badantahay in la dhamaystiro:
Pierre-Emerick Aubameyang to Arsenal: Arsenal ayaa madax u dirtay Dortmund 10 maalmood ka hor si ay u soo xiraan wadahadalada ay ku doonayaan saxiixa xiddiga Aubameyang kaas oo ay ugu dambayn ku guulaysteen in ay kooxda reer Germany kala heshiiyeen qiimihiisa, Aubameyang ayaa shalay u soo duulay magaalada London waxana maanta saacada ay noqotaba la sugayaa in lagu dhawaaqo heshiiskiisa.
Olivier Giroud to Chelsea: Kooxda chelsea ayaa suuqa January oo dhan lala xiriirinayay weeraryahano cusub iyada oo ku dhawaad 10 xiddig oo weerarka ka ciyaara lala xiriirinayay laakiin waxa ay haatan u muuqataa in ay helayaan xiddiga reer France ee Giroud kaas oo maanta noqon kara xiddig chelsea ah kadib markii ay labada kooxood ka heshiiyeen qiimaha xiddiga oo dhan 18 milyan oo euro.
Riyad Mahrez to Manchester City: Xiddiga garabka uga ciyaara Leicester City ayaa ugu dambayn u muuqda mid ka tagaya kooxda dacawooyinka kadib markii uu warqada bixitaanka u gudbiyay kooxdiisa markii labaad muddo sanad ah, Kooxda hogaanka u haysa horyaalka Premier league ee Man City ayaa shalay galab si lama filaan ah dalab uga gudbisay saxiixa xiddigan inkasta oo laga diiday dalabkaas.
Lucas Moura to Tottenham: Xiddiga reer Brazil ayaa wakhti aanu farxad helin ku qaatay kooxda PSG laakiin waxa uu haatan u muuqdaa mid soo afjaraya wakhtigaas adkaa, Lucas ayaa kaliya 6 kulan u saftay PSG xilli ciyaareedkan waxana uu haatan qarka u saaran yahay in uu ku soo biiro Premier league isaga oo saacadaha soo socda noqon doona xiddiga Spurs ah.
Saxiixyada Kale ee Dhici kara: Hadii Arsenal dhamaystirto saxiixa Aubameyang, Giroud-na ku biiro Chelsea, Dortmund ayay u badantahay in ay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga Michy Batshuayi iyada oo ku qaadan doonta amaah inta xilli ciyaareedka ka dhiman ah.
Kooxda West Brom ayay u badantahay in ay sii haysato xiddiga diirada u saaran kooxda Arsenal kadib markii uu dhaawac soo gaaray xiddiga laakiin lacag fiican ayay ku iibin doontaa hadii ay Arsenal la soo xiriirto saacadaha haray.
Chelsea ayaa gabi ahaanba isaga hartay baacsiga Edin Dzeko kaas oo haatan ku sii sugnaan doona kooxdiisa Roma iyo Italy kadib markii uu heshiis la gaari waayay Blues.